Zvekuita Mamiriro Ekugadzira Akanaka Kwazvo Kutakura Rings
Chii chinonzi maringi anotakura ari kureva? Iyo inobata mhete inoreva kune isina musono simbi pombi inova inopisa-yakakungurutswa kana kutonhora-yakakungurutswa (inotonhorera yakadhirowewa) yekugadzira yakajairika rolling inobereka mhete. Iyo yekunze dhayamita yesimbi pombi ndeye 25-180mm, uye iyo rusvingo ukobvu ndeye 3.5-20mm, iyo inogona kukamurwa int ...
Oiri-isina mabheyari mhando nyowani yema lubricated mabhegi, ane hunhu hwesimbi mabheyari uye asina-mafuta mabheyari. Inotakurwa nesimbi matrix uye yakazadzwa neakasarudzika solid solid lubricating zvinhu. Iine hunhu hwekukwira kutakura chinzvimbo, kukanganisa kusagadzikana, yakakwira temperatu ...
Iwe unoziva here kuti ndeapi mamishini zvikamu mabheyari ari? Ivo vanonzi "chikafu chemuchina indasitiri" uye anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzakakosha dzemuchina. Nekuti izvi zvakakosha zvikamu zvinoshanda munzvimbo isingaonekwe, kazhinji hazvinzwisiswe nevasiri nyanzvi. Vazhinji vasiri mechanica ...